၃သန်းပြည့်traderကို FBSမှ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်!
တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ! ၃သန်းသောအရောင်းအ၀ယ်သမားများသည် FBSကို အကျိုးတော်ဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်. ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် မိတ်ဆွေကြီးတို့ရေ, တကယ်ပဲကျေနပ်သဘောကျမိပါတယ်.
ဒါဆို ၃သန်းမြောက် ဖောက်သည်တော်က ဘယ်သူများပါလဲ? အင်ဒိုနီးရှားမှ ကံထူးရှင်Rudianto ချက်ချင်းပဲဆက်သွယ်ပြီး ဒီအံ့အားသင့်ဖွယ်သတင်းအကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်. သူ့ဘက်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့လဲ? ပထမတော့ သူမယုံသေးပါဘူး. မိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်ဆိုတာ ဖြစ်ခဲတာကိုး.ဒါပေမယ့် ဒီသတင်းဟာ အမှန်ပဲဆိုတာ သူသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ကို သူပျော်သွားခဲ့ပါတယ်!
" တနေ့မှာ ကျနော် ဖေ့ဘုတ်ခ်သုံးရင်းနဲ့ FBSရဲ့ပရိုမိုးရှင်းအကြောင်း ပို့စ်ကိုမြင်မိပြီး - ငါကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ရောင်းဝယ်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အကြံရလာပါတယ်. ဒါကြောင့်ပဲ FBS၀က်ဆိုဒ်ကိုသွားပြီး အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်, အဲ့နေ့ကတော့၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်. အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ FBS အင်ဒိုနီးရှားရုံးခွဲကနေပြီးတော့ ကျနော်က ၃သန်းမြောက်ဖောက်သည်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖုန်းဆက်လာပါတယ်, မယုံနိုင်စရာပါ! ဆုလက်ဆေင်အဖြစ် ဘာများလိုချင်ပါသလဲလို့ သူတို့ကမေးပါတယ်. အဲ့ဒါက ကျနော့အတွက် တကယ့်ကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်အနည်းငယ်လောက် စကားတောင်ပြန်မပြောနိုင်ဘဲဖြစ်သွားပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကျနော် စိတ်ကူးထားပြီး လိုချင်တာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ - Canon EOS 70D KIT 18-55mm wi-fi ကင်မရာကိုချက်ချင်းပဲသတိရလာခဲ့ပါတယ်. Tele Lens ကိုတောင်အထူးအပိုဆုအနေနဲ့ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်! အခုလိုကံထူးခဲ့တာကို အခုချိန်အထိတောင် သိပ်မယုံချင်သေးပါဘူး, ဒါပေမယ့် ကျနော်အမြဲယုံကြည်နေမယ့်အရာကတော့ FBSကုမ္ပဏီက တကယ့်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတာပါပဲ! ဒါကြောင့် အခုကနေစပြီး ကျနော်အရောင်းအ၀ယ်စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ရာမှာ FBSကိုသာ ဆက်လက်ရွေးချယ်သွားမှာပါ. ကျေးဇူးပါ မိတ်ဆွေတို့ရေ!" ကောင်းပါပြီ Rudiantoရေ ကျွန်ုပ်တို့ကို ယုံယုံကြည်ကြည်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်! အခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ် ပရိုမိုးရှင်းများလဲရှိပါသေးတယ်. မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါ!